Doctored Red Velvet Cake Mix - Sonkor Geek Show - Keega
Rooti Degdeg Ah
Doctored Red Velvet Box Isku Darka Keega
Tani waa sida aan dhakhtar ugu qoro sanduuqa jilicsan ee casaanka ah si aan uga dhigo dhadhamin badan sida laga sameeyay xoq. Maaddooyinka lagu daray waxay siinayaan keegga qaab ka fiican, dhadhan badan, iyo xasillooni dheeri ah oo la isku dhejiyo. Tijaabinta isku dhafka sanduuqa waa hab aad u wanaagsan oo aad ku dhadhamin karto keegaaga haddii aadan weli ahayn dubbiil kalsooni qaba ama aad u baahan tahay oo kaliya toobiye.
Waxyaabaha Ay Ka Kooban Yihiin Cake Red Velvet
Cuntadani waxay ku saleysan tahay aniga Cunto karinta WASC iyo aniga Shukulaatada WASC . Sababta aan ugu darno waxyaabo badan sanduuqa isku dhafka ah ayaa ah iskiis, sanduuqa isku dhafka ah oo quruxsan oo jilicsan oo jilicsan. Waxba kuma khaldana runti laakiin inta badan akhristayaashaydu waa qurxiyaan keeg xirfadlayaal ah ama kuwa wax jecel oo hiwaayad u ah iyo sida keeg adag oo isku dhejin kara.
Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah, velvet casaan ah oo ka soo xoqday runtii runtii way fududahay in la sameeyo sidoo kale. Malaha waa mid ka mid ah keega ugu fudud ee laga dubo xoqida sidaa darteed haddii aad xiiseyneyso qaadashada boodadaas, iska hubi my karinta rootida maro jilicsan oo dhab ah.
Haddii aadan lahayn caano subag, waxaad samayn kartaa a Bedelka caanaha subagga ama isticmaal caano halkii.
Tallaabo tallaabo tallaabo-tallaabo ah oo loo sameeyey Keega Cas ee Casriga ah
Tallaabada 1 - Kuleyli foornadaada ilaa 335ºF kuna diyaari seddex 8 ″ x2 ″ digsi keeg ah keega goop ama nooca aad doorbidayso ee sii deynta digsiga.
Tallaabada 2 - Ukuntaada, labeen dhanaan, iyo caano subag keen heerkulka qolka .
keega strawberry laga soo bilaabo keegga cad cad isku darka gelatin
Tallaabada 3 - Ku dar isku darka keega iyo dhammaan waxyaabaha ku jira baaquli isku-darka miiskaaga adigoo ku dhejinaya lifaaqa ku dhegan.
Tallaabada 4 - Isku qas hoose illaa 30 ilbiriqsi si aad isugu darto maaddooyinka ka dibna xoqid baaquli.
Tallaabada 5 - Ku dheeree xawaaraha dhexdhexaadka ah iskuna qas laba daqiiqo.
Tallaabada 6 - U kala qaad dufanka saddexda digsi oo dub ilaa 25-30 daqiiqo ama ilaa caday ka soo baxdo xarunta oo nadiif ah.
Tallaabada 7 - Keegaaga ha ku qaboojiso digsiga ilaa digsiga uu si diirran u kululaanayo (ilaa 10 daqiiqo) ka dib ku sii daa silig si uu si buuxda u qaboojiyo.
Haddii aad rabto inaad qurxiso keegaaga isla markiiba, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad keega dhigtid qaboojiyaha muddo 60 daqiiqo ah si aad u qaboojiso ka dibna waad dhaxan kartaa. Ama waad ku duubi kartaa duubka balaastigga ah oo waad dhaxan gelin kartaa habeenkii haddii aad rabto inaad qurxiso maalinta xigta.
Talo-siin: Keegaaga keyd ka dhig qufulada diirran ee qoyaanka kana ilaaliya inay qalalaan.
sida loo sameeyo naqshadaha canjeelada
Tallaabada 8 - Ka dib marka keegaagu qabowdo waad qurxin kartaa keeggaaga sikastoo aad rabto ama fiiri fiidiyowga si aad u aragto sida aan ugu qurxiyey tayda muuqaalkan quruxda badan ee quruxda badan!
Sida Loo Qurxiyo Keegga
Waxaan ku midabeeyey 1/3 oo ka mid ah buttercream-keyga casaanka leh midabaynta cuntada casaanka ah laga bilaabo Americolor ka dibna 1/3 casaan khafiif ah oo isku midab ah cunno leh oo bidix tii ugu dambaysay ka tagtay.
Haddii aad ubaahantahay inaad waxbadan kabarato sida loo qurxiyo keega waad hubin kartaa kan sida loo sameeyo casharkaaga ugu horeeya ee keega.
lakabyadaada ku duub buttercream ka dibna mari jaakad jajab khafiif ah ka dib qaboojiyaha 20 daqiiqo
Kadib dahaadhka jajabka, Adoo isticmaalaya kiish tuubo ah si aad midabadaada ugu darsato banaanka
Ku jilci subagga caanaha leh shanlada keega
Kudar dollops of buttercream dusha iyo kubbadaha ciridka cad
Si aan u simo banaanka keega, waxaan isticmaalayaa shanlaha keega dahabka ah ee loo yaqaan 'Cherry jawharad' oo laga keenay keega Ester .
Cunnooyinka la xiriira
Cake Casaan ah oo Casaan ah
Qaboojiyaha Kareemka Fadhiga
Cake Velvet Cake
Sidee loo sameeyaa sanduuq jilicsan oo jilicsan oo casaan ah dhadhan qoyan oo dheeraad ah! Ku dhowaad sida ugu fiican ee guriga lagu sameeyo. Qofna weligiis ma ogaan doono! Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:35 daqiiqado Kalori:500kcal
Keegga Casaanka ah ee loo yaqaan 'Velvet Cake'
▢1 sanduuqa isku darka keega jilicsan ee jilicsan Waxaan jeclahay Betty Crocker Farxad isku darka keega jilicsan ee jilicsan, ama Duncan Hines.
▢5 ounces (142 g) bur ujeedo oo dhan 1 koob oo lagu dhex milmay oo lala simay
▢7 ounces (198 g) sonkorta granulated 1 koob
▢6 ounces (170 g) labeen dhanaan, heerkulka qolka ama yogurt griig caadi ah - 3/4 koob
▢laba Miisaska cuntada lagu kariyo budada kookaha
▢1/2 tsp cusbo
▢1/2 tsp Fixiso
▢1 tsp soosaarida vanilj
▢laba ounces (57 g) saliidda cuntada 1/4 koob
▢4 ounces (113 g) subag aan cusbo lahayn, dhalaalay 1/2 koob
▢12 ounces (340 g) caano subag, heerkulka qolka ama caano caadi ah + 1 Tbsp oo khal khal cad ah. 1 1/2 koob
▢3 weyn ukunta heerkulka qolka
▢1 Miisaska cuntada Super Red Cunnaynta Midabaynta
▢6 ounces (170 g) ukunta la kariyey
▢24 ounces (680 g) la miiray sonkorta budada ah
▢laba qaaddo soosaarida vanilj
▢24 ounces (680 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢1/8 qaaddo shaaha midabaynta cuntada jaalaha ah
▢1 qaaddo shaaha midabaynta casaan koronto leh
▢laba Miisaska cuntada lagu kariyo midabaynta cuntada casaanka ah
▢Saddex, 8'x2 'digsiyo keeg ah
▢Istaag mashiinka, qas gacmaha ama xitaa maddiibada oo leh shaah
▢Qurxinta: 8 'loox keeg ah, xardhashada keydka, spatula-ka miisaanka, shanlada keega ee loo yaqaan' scallop scallop ', boorsada boorsada iyo caarada dhuunta Wilton 2D.
Wixii Cake ah
Kuleyli foornada ilaa 335 ℉. Diyaarso seddex 8 'digsi keega wareega ah. Waxaan door bidaa inaan isticmaalo keega.
Dhammaan walxahaaga ku dar baaquli isku darka mashiinkaaga oo ku lifaaqan lifaaqa suufka oo isku qas qadar yar 2 daqiiqo si aad isugu darto.
Ku daadi batterigaaga keegaga oo dub ilaa 25-30 daqiiqo illaa caday ka soo baxdo xarunta iyada oo ay u yaalliin xoogaa burbursan oo dhegdheg ah oo ku dhagan cadayga. Waxaan si tartiib ah u taabanayaa dusha sare ee keega si aan u arko haddii ay dib ugu soo laabanayaan si aan u hubiyo haddii ay dhammaatay iyo in kale. Haddii ay u baahan tahay waqti dheeri ah kaliya dubi ilaa 1 daqiiqo ka badan ka dib mar kale hubi.
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah baaquli fiicni dhalada. Ku dhaji foornada oo isku dar walxaha hoose kadibna kor u karbaash sare ilaa 1 daqiiqo si aad u milisid sonkorta budada ah
Ku dar milixdaada iyo soosaarida vanilj
Ku dar subaggaaga jajabyo oo ku karbaash lifaaqa isku-darka si aad isugu darto. Waxay u ekaan doontaa curd markii hore. Tani waa caadi. Waxay sidoo kale u muuqan doontaa jaalle quruxsan. Karbaash sii wad.
Haddii buttercream-kaaga u muuqdo mid la jarjaray, ka saar qiyaastii 1/3 koob oo ah buttercream oo ku dhalaali microwave-ka illaa 10-15 ilbidhiqsi illaa uu si dhib yar u dhalaaliyo. Mar kale ku shub burcadda subagga la karbaashay si aad u wada keento.
U beddel lifaaqa suufka oo isku qas qun yar illaa 15-20 daqiiqadood si aad uga dhigto buttercream mid aad u siman oo ka saar goobooyin hawo ah. Tan looma baahna laakiin haddii aad dhab ahaantii rabto dhalaal qabow, ma rabto inaad ka boodo.
U adeegida:1jeex|Kalori:500kcal(25%)|Kaarboohaydraytyada:kontong(17%)|Protein:labag(4%)|Dufan:30g(46%)|Dufan Dufan:labaatang(100%)|Kalastarol:112mg(37%)|Sodium:150mg(6%)|Kalibaalium:30mg(1%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:35g(39%)|Vitamin A:400IU(8%)|Kaalshiyamka:shan iyo tobanmg(laba%)|Bir:1mg(6%)
Sida Loo Sameeyo Cake Aroos
Buttercream Mareykan ah
dejinta kareemka la kariyey ee kareemka dhalada
meesha laga iibsado marzipan lagu dubo
sida loo sameeyo keega talaabo talaabo
xagee ka heli karaa kalgacal keega
Cunto REAL ah, iskudhiska xabkaha ee xasilloon ee super duper fudud oo la sameeyo, dhadhan fiican leh oo si fudud loo heli karo waxyaabo.
Sida loo sameeyo isku darka sanduuqa dhadhanka guriga
Sida loo sameeyo isku darka sanduuqa dhadhaminta guriga 5 talaabo oo sahlan. Isku darka sanduuqa ayaa ah xal fudud oo wax lagu dubo oo kuwan oo ah 5 talooyin ayaa dhadhamin doona sida guriga loogu sameeyo!
Cunto fudud Marzipan
Cunnooyinka ugu fiican ee ukunta bilaa ukuska ah waxay leeyihiin 4 maado oo kaliya waxayna isugu yimaadaan 5 daqiiqo. Lacag kaydi oo samee marzipan kuu gaar ah!